Taageerayaasha Manchester United oo xiddig aan ahayn Pogba iyo Rashford u doortay rigoore-tuuraha koowaad ee kooxdooda! – Gool FM
(Manchester) 26 Agoosto 2019. Taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa codeyn sameeyey iyagoo ku doortay ciyaaryahanka ay tahay inuu rigoorada u tuuro kooxdooda kaddib markii gool ku laadyadii ugu dambeeyey naadigooda laga khasaariyey.
Manchester United ayaa lumisay labo ka mid ah saddexdii rigoore ee loo dhigay kooxda kulamadda horyaalka Premier League, waxaana gool ku laadyadaas ka lumiyey Marcus Rashford iyo Paul Pogba.
Pogba ayaa rigoore ay saddex dhibcood ku heli lahayd Red Devils ka khasaariyay kulankii Wolves ee Isniintii hore, waxaana sii raacday in Marcus Rashford uu rigoore birta ku dhuftay kulankii Sabtidii ay guuldarradu ka soo gaartay kooxda Crystal Palace.
Jariirradda Manchester Evening News ayaa codeyn ka qaaday taageerayaasha Manchester United, waxaana ay weydiisay inay doortaan xiddiga ay doonayaan inuu qaado masuuliyadda rigoore tuurista kooxdooda.
Balse sheekada layaab leh ayaa noqotay in taageerayaasha kooxdu ay ka leexdeen labadii ciyaaryahan ee masuuliyadda rioore tuurista kooxdu u dooratay ee Pogba iyo Rashford, waxaana ay doorteen Weeraryankooda reer France ee Anthony Martial.
Anthony Martial waxa uu ahaa rigoore tuuraha koowaad ee kooxdiisii hore ee AS Monaco xilli uu joogay dalkiisa Faransiiska, sidoo kalena waxa uu masuuliyadda rigoore tuurista Manchester uu qaatay sanadkiisii ugu horreeyey ee kooxda, markaasna Martial wax rigoore ah kama khasaarin kooxdiisa Red Devils.
Jamaahiirta Man United ayaa 51% u codeeyey in Anthony Martial loo dhiibo rigoore tuurista kooxda, waxaana ku soo xiray Rashford, iyadoo xiddiga reer England uu helay 34% codadkii la dhiibtay.
Kaalinta saddexaad waxaa codeyntan ka soo muuqday Paul Pogba oo helay 11% cod, halka 5% ay taageerayaashu sheegeen in xiddig kale oo kooxda ah loo dhiibo gool ku laadyada Man United.